UMargaret we-Anjou, uMahokazi wase-England u-Henry VI
U-Queen Consort ka-Henry VI
Margaret of Anjou Amanani:
Uyaziwa ngokuba ngu- Queen Consort kaHenry VI waseNgilani, ubalwa kwiiMfazwe zeRoses kunye neMfazwe Yeminyaka eyiMinyaka, umlinganiso kwimidlalo emine nguWilliam Shakespeare
Imihla: Matshi 23, 1429 - Agasti 25, 1482
Yaziwa nangokuthi: nguMekazi uMargaret
UBawo: uRene (Reignier), "Le Bon Roi Rene," Isibalo sikaAnjou, kamva u-Count of Provence kunye noKumkani waseNaples noSicily, uKumkani waseYerusalem. Udadewabo Marie d'Anjou wayeyinkosikazi yaseChristal VII yaseFransi
Umama: u- Isabella, iDuchess of Lorraine
UMargaret weAnjou Biography:
UMargaret wa-Anjou wakhuliswa kwingxabano yentsapho phakathi koyise kunye nonina kayise apho uyise wayeneminyaka ethile evalelwe entolongweni. Unina, u-Duchess waseLorraine ngokwakhe, wayefundiswe ixesha lakhe, kwaye ekubeni uMargaret wayechitha ubuncinane bakhe ebuntwaneni, kwaye unina kaYolande waseAragon, uMargaret wayefundiswe kakuhle kakuhle.
Umtshato kuHenry VI
Ngo-Apreli 23, 1445, uMargaret wa-Anjou watshata no-Henry VI waseNgilani. Umtshato wakhe kuHenry wahlelwa nguWilliam de la Pole, kamva umbusi weSuffolk, inxalenye yeqela leLancastrian kwiiMfazwe zeRos; imitshato eyahlula iNdlu yaseYork ukufumana umtshakazi kaHenry. UKumkani waseFransi waxoxisana nomtshato kaMargaret njengenxalenye yeTruce of Tours, eyayilawula u-Anjou waya eFransi yanikezela uxolo phakathi kweNgilani neFransi, okwenzela okwesikhashana imfazwe eyaziwayo kamva njengeMfazwe Yeminyaka Elikhulu.
UMargaret wayekhenkce eWestminster Abbey.
Ngo-1448, uMargaret wasungula i-Queen's College, eCambridge. Wadlala indima ebalulekileyo ekulawuleni umyeni wakhe, uxanduva lokunyusa irhafu kunye nokwenza ukufanisa phakathi kwe-aristocracy.
UHenry wayelityebile isithsaba sakhe xa wayeseyingane, uKumkani waseNgilani kwaye ebiza ubukumkani baseFransi ngelifa.
UFransi uDauphin, uCharles, wathweswa ingqungquthela njengoCharles VII ngoncedo lukaJoan waseArc ngo-1429. Kwaye uHenry wayelahlekelwe kakhulu kweFransi ngo-1453. Ngethuba lobuncinci uHenry wayefundiswe kwaye wakhuliswa yiLancastrians ngoxa uMduka waseYork, umalume kaHenry , wabamba amandla njengoMkhuseli.
Ngo-1453, uHenry wagula ngenxa yento edla ngokuchazwa njengobunzima; URichard, uDuke waseYork, waphinde waba nguMkhuseli. Kodwa u-Margaret we-Anjou wazala unyana, u-Edward (ngo-Oktobha 13, 1451), kwaye uMbusi waseYork wayengaseyindlalifa esihlalweni sobukhosi. Kamva ama-rumors afikeleleka-ancedo kwi-Yorkists-ukuba uHenry wayengenako ukuzala umntwana kwaye umntwana kaMargaret kufuneka abe mthethweni.
Iimfazwe ze-Roses Qala
Emva kokuba uHenry ahlawule, ngo-1454, uMargaret waba negalelo elikhulu kwezopolitiko zaseLancast, ekhusela ibango lonyana wakhe njengendlalifa eyaneleyo. Phakathi kwamabango ahlukeneyo ukulandelana, kunye nehlazo likaMargaret inxaxheba ekukholeni, iMfazwe yamaRos yaqala kwimfazwe yaseSt Albans, ngo-1455.
UMargaret wadlala indima ebonakalayo kumzabalazo. Wayekrazula iinkokeli zaseYorkist ngo-1459, wenqaba ukuqaphela iYork njengendlalifa kaHenry. Ngo-1460, iYork yabulawa. Unyana wakhe u-Edward, ngoku nguDuke waseYork kunye no-Edward IV kamva, badibana noRichard Neville, eWarwick, njengabaholi beqela laseYorkist.
Ngo-1461, uMargaret kunye neLancastrians batshatyalaliswa e-Towton. U Edward VI, unyana kaRichard, uRuke waseYork, waba nguKumkani. UMargaret, uHenry, kunye nendodana yabo baya eSkotland; UMargaret waya eFransi waza wancedisa ukulungiselela inkxaso yesiFrentshi yokuhlasela iNgilani. Imikhosi yahluleka ngo-1463. UHenry wabanjwa waza wathunyelwa kwiNqaba ngo-1465.
IWarwick, ebizwa ngokuba ngu "Kingmaker," yamnceda u-Edward IV ekunqobeni kwakhe kuqala uHenry VI. Ukuwa kunye noEdward, iWarwick yatshintsha amacala, kwaye yamxhasa uMargaret kwisizathu sakhe sokubuyisela uHenry VI esihlalweni sobukhosi, abaye bakwazi ukuyenza ngo-1470. Intombi yaseWarwick u- Isabella Neville watshata noGeorge, uDuke waseClarence, unyana kaRichard, IDuke waseYork. UClarence wayengumzalwana ka-Edward IV kunye nomzalwana wobukumkani olandelayo, uRichard III. Ngowe-1470, uWarwick watshata (okanye mhlawumbi wanyulwa) intombi yakhe yesibini, u- Anne Neville , waya ku-Edward, iPrince yaseWales, unyana kaMargaret no-Henry VI.
UMargaret wabuyela eNgilani ngo-Ephreli, ngo-1471, kwaye ngaloo mini, iWarwick yabulawa eBarnet. NgoMeyi, ngo-1471, uMargaret kunye nabalandeli bakhe bahlulwa ekulweni kweTewkesbury. UMargaret kunye nendodana yakhe bathathwe entolongweni. Unyana wakhe, uEdward, iNkosana yaseWales, wabulawa. Umyeni wakhe, uHenry VI, wasweleka kwiNqaba yaseLondon, mhlawumbi wabulawa.
UMargaret wa-Anjou waboshwa eNgilani iminyaka emihlanu. Ngowe-1476, uKumkani waseFransi wahlawulela iNgilani ngentlawulelo, waza wabuyela eFransi. Wahlala entluphekweni de wafa ngo-1482 e-Anjou.
UMargaret weAnjou kwiFiction
UMargaret we-Anjou: Uthi uMargaret kunye no-Queen Margaret, uMargaret weAnjou ngumlingiswa kwimidlalo emine, uHenry VI Parts 1 - 3 kunye noRichard III . I-Shakespeare icinezela kwaye itshintshe imicimbi ngenxa yokuba imithombo yakhe ayilunganga, okanye ngenxa yecebo lombhalo, ngoko ukumelelwa kukaMargaret eShakespeare kukubonakalisa uphawu kunezembali. UMargaret, umzekelo, wawungekho kufuphi no-Edward IV ngexesha uShakespeare aqalekisa ngayo iYorkists. Wayehlala eParis ukusuka ngo-1476 de wafa ngo-1482. Xa eqalekisa uElizabhete ukuba ahlupheke njengoko uMargaret ehlupheka, ngokulahlekelwa yindoda nendodana, uyayeka ukuba (uMargaret) wabandakanyeka ekufeni kwabantu baka-Edward IV noRichard III. Abaphulaphuli bakaShakespeare bafanele bakhumbule ezo nyiko, nangona kunjalo, okuza kwenza ngakumbi ngakumbi into ebonakala ngathi yiShakespeare: umzekelo wokuphindaphindiweyo wokubulala phakathi kweentsapho ezinxulumene nezindlu zaseYork naseLancaster.
I-Priory of Zion: Uyise kaMargaret uRene wayebizwa ngokuba yiNtlunkulu oyiNtloko ye-Priory yaseSion, intlangano ephakanyiswe yiincwadi ezifana ne -DaVinci Code . Ubukho bentlangano ngokubanzi buxothwa ngabalwazi-mlando ngokusekelwe kubungqina obunjiweyo.
I-Queen Queen : Kwi-BBC enye uchungechunge olujolise kubasetyhini beMfazwe yamaRos (uMahokazi Omhlophe ngu-Elizabeth Woodville, uMdaka oBomvu nguMargaret Beaufort ), uMargaret we-Anjou ungomnye wabalinganiswa abaqingqiweyo.
Umfanekiso weMargaret we-Anjou - umzekeliso wekhulu le-19 esekelwe kwimifanekiso ephakathi
UMariya, uMthekazi waseScots
I-Top 10 Women Suffrage Abasebenzi
Biography kaLucrezia Borgia
I-SAT Amanqaku okuthelekiswa kwamkelwa kwiiKholeji zase-Indiana
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: Rompere
I-Prehistoric Barbie Doll (Ileta esuka kwi-Smithsonian)
Fort Uyimfuneko kunye neMfazwe yezilwanyana ezinkulu
Kuphi ukuhamba ngaphandle komgwaqo
Imbali yesiHlomelo sokuQala
Imfazwe Yehlabathi II: Imfazwe yeFalaise Pocket
Iimfuno zeDwala ukunyuka: Ukunyuka eMzantsi Dakota
Imisebenzi eyi-100,000 yamaCasino
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele u-Oliver O. Howard
I-Chiasmus Umfanekiso weNtetho
3 ii-Compasses ezikhethwe ngamahlathi